Filoha Ganeana, Manome Toky Tsy Hanapaka Ny Media Sosialy Mandritry Ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Filoha Ganeana, Manome Toky Tsy Hanapaka Ny Media Sosialy Mandritry Ny Fifidianana
Voadika ny 20 Septambra 2016 13:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, English
Vatam-pifidianana. Sary an'i Sheila Rouge, natao haverina ampiasaina.
Nisy adihevitra be teo amin'ireo mpandray anjara ny amin'ny tokony handraràna ny media sosialy mandritra ireo fifidianana hatao ao Ghana. Tamin'ny May 2016 teo, nanao tsilian-tsofina ny Inspektora Jeneralin'ny Polisy (IJP), John Kudalor, fa hoe mety hoheverin'ireo manampahefana Ganeana ny hanakatona ireo sehatra media sosialy mandritra ny ireo fifidianana hatao ny 7 Desambra mba “hitandroana ny filaminana”. Nambaran'ilay IJP fa ny faniriana hanakatona ny media sosialy mandritra ny fifidianana dia mifototra amin'ny zavamisy hoe manararaotra tafahoatra ny fampiasàna ilay habaka ny olona sasany mandritra ny fifidianana. Na izany aza, ny 14 Aogositra teo, nanambara ny filoha Ganeana fa tsy hakatona ny media sosialy izany mandritra ireo fifidianana hoavy, ary “tsy ao an-tsain'ny governemanta mihitsy ny hanakatona media sosialy amin'ny andro fifidianana”.
Firenena Afrikana samihafa no efa nandrafitra fomba fanao hanakanana ireo sehatra media sosialy mialoha, mandritra ary aorian'ireo fifidianana, amin'ny fitanisàna “ny olana amin'ny resaka filaminana’. Nandritra ireo fifidianana vao haingana tao Ogandà, nodidian'ny governemanta ireo orinasam-pifandraisana mba hibahana ny fidirana amin'ireo sehatra media sosialy malaza. Voabahana ihany koa ireo sehatra media sosialy talohan'ny fanokanana an'i Museveni, filoha Ogandey. Vao haingana no samy naneho ny fikasàny hametraka fanarahamaso henjana amin'ny media sosialy, na i Ogandà na i Nizerià.
Tena tsy ela akory izay, ny fitondrana tao Gabona no nibahana ny fidirana aterineto nandritry ny fotoana fohy taorian'ny nanombohan'ireo mpahonitra nanao fihetsiketsehana nanoherana ny vokatry ny fifidianana natao vao haingana ka toa nandresen'ny filoha amperinasa, Ali Bongo, tamin'ny isa tery dia tery. Fibahanana naharitra andro dimy.
Taorian'ireo fanamarihana nataon'ilay IJP, navondron'ny “Centre for Constitutional Order (CENCORD)” ireo mpandray anjara avy amin'ny Sampandraharahan'ny Polisy ao Ghana, ireo manampahaizana manokana momba ny filaminana, ny solontenan'ireo antoko pilitika ary ampahany avy amin'ny olontsotra mba hiresaka momba ny lohahevitra “Ny Fandraràna ny Media Sosialy mandritry ny Fifidianana Solombavambahoaka 2016 : ny Fidiran'ny Resaka Filaminana manoloana ny Fanamarinana araka ny Lalàna.”
Lahatsoratra iray navoaka taorian'ilay vovonana nifampiresahana no nilaza hoe nolazain'i Irbard Ibrahim, Ambasadaoron'ny Fandriampahalemana sy Mpandalina resaka Fiarovana fa “ny fampiasàna fahatany ny media sosialy hizaràna vaovao/torohay diso dia mety hanelingelina ny fandriampahalemana mandritra ny fifidianana raha tsy ambenana araka ny tokony ho izy.” Niombonan'i Richmond Ofosuhene ireo fanehoankevitra avy amin'ireo manampahaizana manokana momba ny resaka fiarovana :
Na izany aza, Kwame Ahiabenu tale mpanatanteraky ny fikambanana sivily momba ny teknolojia, PenPlusByte, dia nanana fomba fijery hafa ary tsy nanohana ny fandraràna ny media sosialy mandritra ny fifidianana. Nomarihany fa :
Tsy loza mitatao ho an'ny filaminam-pirenena ny media sosialy amin'ny maha-media sosialy azy. Ny mifanohitra amin'izay aza, ny mpampiasa ireny media sosialy ireny, ary raha misy araka izany ny loza mitatao, dia ny olona, ka ny tokony hataontsika dia ny manaraka maso akaiky, fa tsy ny manakatona sehatra media sosialy.
Ny fanambaràna nataon'ny filoha no mamehy ireo sahoan-dresaka rehetra momba ny fandraràna ny media sosialy mandritra ny fifidianana. Miabo no nandraisan'ireo mpiondana sy mpiaro ny media sosialy ilay fanambaràna. Ahiabenu no nizara ny fomba fijeriny, tamin'ny fitenenana hoe :
Mendrika fiderana ny fanambaràna nataon'ny filoha satria ny fandraràna dia nametraka “horohoro amin'ny maha-izy azy ny fifidianana efa mba tratran'ny firenena,” amin'ny fanampiana fa hampametra-panontaniana momba ny ‘demaokrasiantsika sy ny maha-tany tàn-dalàna’ ny fisian'ny fanakatonana. Ho solony, hoy izy nanamarika, “ny fiadidiana ny lapa, amin'ny maha-birao politika faratampony azy eto amin'ny -firenena, efa nanome toky antsika fa tsy hisy fahatapahana ny fifandraisana an-tserasera amin'ny Desambra.”
Ao anaty lahatsoratra iray navoakan'ny GhanaWeb, Franklin Cudjoe, filohan'ny IMANI, kitapon-kevitra ao Ghana, dia nidera ny Filoha tamin'ny nilazàny fa tsy hisy fanakatonana media sosialy mandritra ireo fifidianana hoavy. Hoy izy :
Soa ihany fa efa napetrapetraky ny filoha ny amin'io ary heveriko fa mendrika deraina mihitsy aza izy, heveriko fa tsy tokony havela hisy fotoana mafampàna azon'ireo mpandranitra ho araraotina amin'io fifidianana io. Ny polisy efa tokony “hanomboka hampiasa ilay fitaovana mba hanabeazana ny vahoaka ao amin'ny media sosialy ary azon'izy ireo atao aza izany ao amin'ny WhatsApp sy ny sehatra media sosialy hafa rehetra.” Tsy resaka hoe manana tombon-dahiny na tsia. Ny polisy “tokony hampiditra matianina izay afaka hampianatra azy ireo ny fampiasàna ny media sosialy ho amin'ny vokatra tsara. Heveriko fa izany no làlana tokony hizorana.”
Kanefa, ny Spy News Agency (@SpyNewsAgency1), masoivohombaovao iray ety anaty aterineto dia naneho hevitra fa misy ampahany amin'ireo Ganeana no nanohana ilay fandraràna ny media sosialy tsy ho ampiasaina mandritry ny fifidianana:
Some people have agued that considering the abuse of social media in Ghana it would not be bad to ban it for just some few hours. #techsalon
— Spy News Agency (@SpyNewsAgency1) August 23, 2016
Lazain'ny olona sasany fa rehefa jerena ny fampiasàna tafahoatra ny media sosialy ao Ghana, tsy ratsy mihitsy ny fandraràna azy io mandritra ny ora vitsy
Tsy ijerena ny fomba miiba nandraisan'ny firenena ilay fandraràna ny media sosialy mandritra ny fifidianana, fa nibitsika fanohanana ilay fandraràna ny sasany amin'ny mpanao gazety toa an'i Jojo Bruce-Quansah (@BruceJojo) tamin'ny filazàna hoe:
For peace,Police can & must do anything.If social media will give us chaos, then so be it, temporary ban is in order https://t.co/H6UnapJmxj
— Jojo Bruce-Quansah (@BruceJojo) May 27, 2016
Ho an'ny fandriampahalemana, afaka & tsy maintsy ataon'ny polisy ny rehetra. Raha hiteraka korontana ho antsika ny media sosialy, dia izay izany, ara-dalàna ny fandraràna vonjimaika